Kedu ndị na-ere ahịa nwere ike ịmụta site na Dell's IT Transformation Research? | Martech Zone
Dell kọwara Teknụzụ Ozi mgbanwe dị ka usoro nke ịkwalite ozi na teknụzụ nkwukọrịta iji mee ka ndụ mmadụ rụọ ọrụ nke ọma ma ka mma. Mgbanwe IT na-etinyere na akụrụngwa iji meziwanye arụmọrụ na sistemụ n'ihi ibelata ịla n'iyi nke akụ.
Mụ na ya na-arụkọ ọrụ Akara Schaefer na onye ahịa ya, Dell Technologies, na ọnwa ole na ole gara aga iji bipụta pọdkastị nke na-enye nghọta maka ndị na-anya Mgbanwe IT yana nchọpụta dị ịtụnanya gbara gburugburu. A na-akpọ pọdkastị Ihe na-enye ìhè.
Mgbanwe IT na-adabere n'ile anya na otu ị kachasị mma si tinye teknụzụ n'ime usoro azụmahịa gị, ihe si na ya were, otu ụlọ ọrụ gị si gbanwee mgbanwe na teknụzụ, yana otu azụmahịa si nwee ike ịgbanwe site na iji ihe ọmụma .
IT mgbanwe Key Takeaways
Ka Dell nyochara ihe mgbanwe teknụzụ ozi bụ, ha jụrụ ọtụtụ ajụjụ, ebe ọ bụ na ha ka mma iji nyere anyị aka ịza ụfọdụ ajụjụ dị mkpa. Otutu n'ime okwu ndi a bu ndi ulo oru ndi dabere na ya mgbanwe ya ma choro inyocha ogo nke nnukwu echiche a na oganihu nke ulo oru di otu a. Ajuju ndi a gunyere: -
Ofdị teknụzụ kachasị eji na ụlọ ọrụ gị
Ofdị sistemụ dị ebe eji eme azụmahịa gị
Ọdịdị nke nkọwa zuru ezu iji zụlite usoro ndị a
Kedu otu esi eji teknụzụ ozi kachasị mma rụọ ọrụ gị.
Ọzọkwa, Dell lere anya na uru mgbanwe IT nwere ike iweta na azụmahịa gị kemgbe ị malitere iji ya. Ebe ọtụtụ ụlọ ọrụ enweela ihe ịga nke ọma n'iji usoro a, ndị ọzọ enwebeghị ike ịghọta uru zuru oke nke iji ngbanwe teknụzụ ozi. Site nyocha emere, o doro anya na ọtụtụ azụmaahịa enweela ike ịmata IT Transformaton ma na-aga n'ụzọ ha ịgbanwe.
Ntanetị Nkebi 01: Njikere, Tọọ, Gbanwee… Gị IT
Ogo nke mgbanwe IT nke ụlọ ọrụ nwetara nwere mmetụta ozugbo na nke a na-ahụ anya na uto azụmaahịa, ọdịiche asọmpi na ikike nke imepụta ihe. Ego ole? Ndị na-ahụ maka ụlọ ọrụ IT na-enyocha nyocha ma nwee azịza dị ịtụnanya. Oge Ọ Na-ewe: 34:11
Ulo oru kacha aga nke oma taa nwere ato puru iche. Nke mbu na nke mbu, ha enweela ike ikwalite iji teknụzụ arụ ọrụ ha niile. Nke abuo, ha eweputala uzo puru iche nke nwere ike iji teknụzụ ihe omuma. Ebe ọ bụ na mgbanwe IT pụtara iji bulie arụmọrụ azụmahịa, ụlọ ọrụ ndị na-eji echiche a eme ihe
Ebe ọ bụ na mgbanwe IT bụ iji bulie arụ ọrụ azụmaahịa, ụlọ ọrụ ndị na-eji echiche a amụta iji hazie ya na igwe ojii ịntanetị maka ịbawanye ụba. N'ikpeazụ, ụlọ ọrụ na-aga nke ọma enweela ike ịmepụta sistemụ teknụzụ ozi dị mfe iji rụọ ọrụ na nke na-anabata ndị ọrụ niile na ụlọ ọrụ ahụ. Azụmaahịa agbanweela kpamkpam na-akwado nkwukọrịta dị mma nke gafere n'etiti ọkwa dị iche n'etiti gọọmentị ahụ.
Ọsọ Bụ Isi Akụkụ Na Mgbanwe Dijitalụ?
Eeh. Imirikiti azụmaahịa taa na-ewere mgbanwe teknụzụ ozi iji nwee ike ịbawanye mma na imepụta ngwaahịa na ọrụ ọhụụ n'ihu ndị asọmpi ha. Corpolọ ọrụ na-aga nke ọma ugbu a enweela ike iwu ngwa ngwa naanị ụbọchị ole na ole, ngwa ndị siri ike nke na ha anaghị enwe nsogbu mmezi.
Ngbanwe IT enyerela aka ịbawanye ọtụtụ ụlọ ọrụ. Iji mezuo nke a, ụlọ ọrụ na-eji teknụzụ enwe ike ịrụ ọrụ ha nke ọma ma wepụta ụzọ ntinye tupu oge. N'ihi ya, mgbanwe IT bụ ngọzi na-agbanwe n'ọtụtụ ụlọ ọrụ.
Site na mmalite, o doro anya na mgbanwe IT dị mkpa maka ihe ịga nke ọma nke azụmahịa gị. Agbanyeghị, tupu ịhọrọ iji ụdị ọhụụ a, ị ga-ebu ụzọ mee nchọpụta mkpụrụ obi dị oke mkpa iji wee nwee ebumnuche mbụ maka ihe kpatara ị ji kwenye na mgbanwe teknụzụ ozi ga-ewetara ụlọ ọrụ gị uru dị ukwuu.
Tinye ego n'ime ihe ọhụrụ ka ị nwee ike ịmepụta ụlọ ọrụ siri ike, nwee ike ịsọ mpi megide ụdị azụmaahịa ndị ọzọ. Nwere ike ịmalite dị ka obere, ma ọ bụrụ na ị nọ n'ụzọ ziri ezi, ị ga-emesị bụrụ ụlọ ọrụ a ga-agụ.
Kedu ihe ndị ahịa ga-amụta na ngbanwe IT?
Ndị na-ere ahịa kwesịrị itinye ego ozugbo na teknụzụ azụmaahịa nke na-ebelata oge na ego, ebe ị na-abawanye uru nke ọrụ rụzuru. Nke a ga - eweta uru na uru ga - eme ka mmetụta ahịa gị bawanye ma belata oge ị ga-eji me ya. Nchekwa ahụ nwere ike ịbụ ntọala nke itinye ego azụmaahịa nke ga-agbanwe azụmahịa gị.
Idenye aha na-enye ìhè na iTunes, Spotify, ma ọ bụ site na Podcast ndepụta.
Tags: Dellozi teknụzụitmgbanwegini bu mgbanwe
Semrush na-agbakwụnye Ngwá Ọrụ iji Na-egwu saịtị Gị ma Chọta Okwu HTTPS